Duulaanka RRA iyo SNM | allsanaag
Duulaanka RRA iyo SNM
Yaa u fududeeyey Raxanweyn iyo Isaaq inay buuraha Cal madow ku dilaan dadkii ay halkaa ugu tageen?
Maanta in badan oo ka mid ah degaanadii Saldanada Warsangeli ka talin jirtay Qarniyada badan waxa xoog ku haysta Raxanweyn iyo Isaaq wada socda, iyaga oo sheegta inay ka tirsan yihiin Ururka Alshabaab.
Hadaba Su’aasha is waydiinta mudan ayaa waxay tahay willka Baydhabo, gobolka Bay ka yimid iyo wiilka Beer gobolka Togdheer ka yimid ee aan aqoonta u lahayn jidka la maro , ceelka laga cabo , meelaa lagu dhuuman karo ee dhufays noqon karta degaanada Maakhir, yaa u fududeyey ama u sahlay inuu soo galo, yaase ku haya maanta Buuraha Barakaysan?
Argagixisada Buuraha Cal madow ku jirtaa in badan oo ka mid ah Beesha Warsangeli ayaa u fududeeyey inay soo galaan Maakhir , iyaga ayaa u ahaa dal yaqaan, iyagaana maanta ku haya Buuraha CAL Madow, iyaga ayaa cuntada u geeya , iyaga ayaa daweeya markii ay dhaawacmaan , qaarkood iyagaa la xididay oo gabdhahooda siiyey oo damacasan inay halkaa ku sii nagaadaan
Qaadwalaha ka soo jeeda beesha Warsangeli ee Badhan iyo Boosaa joogaa, Xamaaliga beeshaas ee Boosaaso iyo Badhan joogaa, hooyada iyo ardayga nolo maalmeedka la tacaalaya ee Boosaaso iyo Badhan joogaa, Qurba joogta Beeshaas ee dalalka caalamka kala joogtaa Xiriir lama laha lamana yeelan karto Urur dimeed saldhigyo ku leh Daafeed iyo Dararweyne, sidaas awgeed kooxda keenta argagixisada oo ku haysa degaanada Maakhir waa koox tiro yar oo u dhaqma sida Isgeeda saarka ama Jirjiroolaha.
Kooxdani, shaki kuma jiro waxay u badan yihiin kuwa dugsiyada Maakhir gacanta ku haya, kuwa shirkadaha maamula. Shirkadahan inta badan waxa laga leeyahay galbeeka iyo Koonfuta Soomaaliya. Kooxdan Shirkadaha gacanta ku haya, haddi ay guri ka dhisanayaan Maakhir waa kuwo u yeerta asxaabtooda Baydhabo iyo Berbera si ay umadda u marin habaabiyaan iyagana hoosta uga sii wataan hawlahooda argagixsnimo. Kuuli dhagax ka jebiya Badhan iyo Buraan, lama waayin ee waa maxay baahida keentay in Baydhabo laga keeno aan ka ahayn falka Isgeeda saarka.
Tusaale: shirkada Telefoonka ee Birtu uga taagan tahay Buurha Calmadow, ninka ilaaliyaa waa oday d’a ah oo ka soo jeeda beesha Warsangeli oo ku mushahaar qaata. Laakiinse howsha ay wadaTto Shirkaddu iyo cidda ay u shaqaynaysaa waa mid dad kale gacanta ku hayaan, oo ka baxsan Maakhir
Shirkadaha telefoonada lacagaha loogu soo shubo argagixisada ama Nambarada bixiya ay qoysaskooda kula xiriiraan waxa laga leeyahay meel ka baxsan Maakhir, ninka wakiilka ka ah waa Warsangeli laakiinse wuxuu la haystaa Daafeed iyo Dararweyne
Hadaba Xalku muxuu noqon karaa.
Soomaali dhowr iyo labaatan sano qabiil ayeey isku dilayeen, Maakhirna qabiil ayaa loogu soo duulay sidaas awgeed waa in la bilaabaa abaabul qabiil oo Raxanweyn iyo Isaaqa dadka ku laynaya buuraha CALMADOW Loola dagaalamaa qaab qabiil oo xoog iyo awood sheegasho looga saaraa Calmadow
Warsangeli waa is yaqaanaayaa, waa in nimanka lagu tuhusan yahay inay gacan saar la leeyihiin argixisada, gabdhahooda siiyey, cuntada u geeya la soo bandhigaa magacyadooda oo meel looga sioo wada jeestaa.
Maakhir dib u dhac ayeey u tahay in waxbarashaddii iyo Telefoonaddii ay gacanta ku hayaan dawlad ka madax banaan banaan reer Maakhir iyo Puntland , halka magaalo kastana ay joogaan madax ka Mushahaar qaadata Puntland oo aan waxba kama qaban arintan. Dugsiyada Maakhir ma wasaaradda waxbarashada Puntland ayeey hoos tagaan mise Koox ka madax banaan dawladda Puntland oo hesha qaaraan lagu xoojiyo argagixisada
Ma jiro maamula Puntland ah oo ka taliya gobolka Sanaag oo nin Warsangeli ah u soo xiray inuu gacan saar la leeyahay Alshabaab. Halka qaarkood marka ay Makhir ka tagaan la qabto iyaga oo falal argagixisnimo gacanta kula jira
Ugu dnbayntii, qofkii og iyo qofkii aan ogaynba maalinba maalinta ka danbaysa Dadqalatooyinku waa ku sii xoogsanayaan Maakhir, mana muuqato dhaq dhaqaaq looga hortagayo aan ka ahayn maamulka Puntland oo aan ka haysan wada shaqayn dadkii degaanka u dhashay oo iyagau afarta jiho u kal socda. Si taas loo bedelona waa in la bilaabaa abaabul looga soorayo buuraha Calmadow Dadqalatooyinka.
Yaa soo ababulay xasuuqa Buurta Calmadow?
Raashin iyo rasaas loogu deeqay Alshabaab
Waa been Dadqalatooyin ayaa ka baxay Calmadow
← Madaxweynaha Jubbaland oo Lagu Soo Dhoweeyeye Sweden. Tix Buraanbur ah:Soomaali caydeeda icitiraaf malgu helaa? →